Ibsa hubannoof: Kun lola Oromoo fi Oromiyaa dadhabsiisuuf godhamu – Oromedia
Home » Yaada » Ibsa hubannoof: Kun lola Oromoo fi Oromiyaa dadhabsiisuuf godhamu
By Milkeessaa Miidhagaa
Lolli Liyyuu Poolisii Sumaaleetiin Oromoo fi Oromiyaa irratti banamee Oromoon Naannoo Sumaaleerraallee buqqaafamee dachee Oromiyaatti deebifamaa jiru kun dhimma waldhabdee daangaa miti. Dhimmi daangaa sababa xiqqaadha.
-Lolichi Lola Oromoo fi Sumaalee miti. Akka sanatti gadi bu’u qaamonni barbaadan ni jiru. Oromoo fi Sumaaleen baha biyyattii jiran miskiina! Kuun horsiisee bula, kuunimmoo ni qotata. Hiyyummaanuu uummata lameen dadhabsiifteetti. Harki caalu midhaan gargaarsaatiin jiraatu! Maalirratti wal-lolu? Humaa! Liyyuu Poolisiin Sumaalee Mootummaa Federaalaatiin karaa heeraa ala ta’een uumame uummata lameenuu dhaanaa ture, ammas itti jira (asirratti poolisiifi milishaan Oromiyaas callisee hin ilaalle).
-Lolli amma Liyyuu Poolisiin Sumaaleen nurratti bante kun lola Oromoo fi Oromiyaa dadhabsiisuuf godhamudha. Kunis walmorkii aangoo ADWUI (EPRDF) keessatti uumeera. Eenyu masaraa Mootummaa Federaalaa haa galuudha dubbiin. Yeroo dhihoo as qabsoon Oromoon gaggeessaa jiru aangoo siyaasaa keenyaaf balaadha warri jedhan, haala kamiinuu Oromoo fi Oromiyaa cabsuuf halkaniifi guyyaa hojjechaa jiru. Kanaafuu, jalqaba irratti qaamota sabboonummaa fi qabsoo Oromoo deeggaran cabsuu filatu. Kan irraan kan ka’e Obbo Lammaa fi garee isaa dhahuun filatu.
Hubadha, Obbo Lammaa fi garee isaa gara aangootti kan fide qabsoo qeerroo fi qarreen gootedha. Garee Lammaa kana dursanii cabsuun hooggansa DhDUO ergamaa wayii kaaayyatanii Oromiyaa fi Oromoo afaan qawweetiin cabsuuf yaaluufi. (Utuma jennuu jarittiin Oromiyaa kana waraanaan bulchuuf kan isheen gamtuuf federeeshinii maqaaf jiru kana diigdee irra deebitee Oromoo qoqqooddee ijaaruu feeti. Gaaf sana biyyattiinis baduun ishee hin oolu).
Hubadhaa, Oromoon biyya kana nurraa fudhatee bulchuun isaa dhiyaateera jedhanii waan cinqamaniif qabsoo Oromoo fi dachee Oromiyaa sodaatu. Waggoota 26n darban DhDUOn dhagahama wayiituu EPRDF keessatti hin qabu ture, Muummi Ministeeraa ta’uu dhiisaatii. Sababni warri aangoo harkaa qabu kaa’an immoo DhDUOn hooggansa cimaa guddifachuu hin dandeenyeedha. Dhugaan jiru garuu DhDUOn hooggansa cimaa ni godhata, garuu warri ABOdha ati jechuun harkaa funaanee hidhee biyyaa baasaa ture. Akkas godhaniitu DhDUOn hooggansa cimaa hin qabu, ajaja keenyaan buluu qaba jehaniituu itti turani. Amma DhDUOn HOOGGANSA cimaa uummateera.
Akka biyya Itoophiyaattuu yoo beekumsaa fi muuxannoo ilaalla ta’e hooggansa qulqullina qabu kan dhiyeessuu danda’u DhDUO qofadha. Dorgommii aangoo masaraa biyyaalessaa irratti godhamu keessatti DhDUOn akka balaatti waan ilaalameef aadaa siyyaasaa dulloome sana awwaara keessaa kaasaniitu Obbo Lammaan, Dr Abiy, Addisuu Araggaan ABOdha jarri sirba jedhu karaa Jijjigaa ykn Abdilleedhaan achii as baasanii sirbisiisani. Sirba yeroon irratti darbe. Humaasaa mataa gadi qabachiisuuf jedhaniitu watwaatu. Yoo namni Oromoof dalage, dhugaan Oromoo kanadha yoo namni jedhe hiikni isaa ABO jechisiisa taanaan maal ta’aree? Prezidaantonni Oromiyaa duraanii kanneen akka Hassan Ali, Junaddiin Saaddoo, hooggantoonni OPDO gameeyyiin ABOdha jedhamaniitu biyyaa akka bahan ta’ani.
Yaadadhaa sirbi Lammaa fi gareen isaa ABOdha jettu ji’a jaha dura JijjigaHerald, achi Aigaforum, TigraiOnline irratti banamte. Har’a olguddatteetu karaa Mootummaa Naannoo Sumaaleetiin sirbamuu eegalte (weerara fi Oromoota buqqise jiras). Miidiyaan soba odeessisa, suuraaalee sobaa fayyadameetu awwaalcha akka naannootti godha, gadda biyyaalessaa godha, Lola saboota nagaa gidduutti uumuuf dibbee waraanaa dhaya. Kun ittigaafatamummaa dhabuudha. Mootummaan Oromiyaa kana ilaalee aaruun waan hin malle keessa galuu hin qabu. Obsaan guddaa gaafata. Ittigaafatamummaa gaafata. Obbo Lammaan aangoorraa haa bu’u jedhe dubbi himaan Mootummaa Naannoo Sumaalee. Dhimmichi maal akka ta’e eenyutu achii as akka dubbataa jiru ifa galeera. Walmorkii aangooti. ADWUI keessaa sponsor taate wann ittiin Jijjigaa irraa achii as dubbatamtullee. Qabatamaadhaan namni Oromiyaa bulchu Itoophiyaas isumatu bulcha. Yoo DhDUOn cime aangoo 4-kiloof sodaachisa waan ta’eefi. Qumaara siyaasaa akkasii saboota Oromoo fi Sumaalee irratti taphachuun dhaabbachuu qaba. Ibiddi amma isaan ittiin taphataa jiran hunda guba. Kana dhaabuu qabu.
-Sabaa fi sablammoota Oromiyaa keessa jiraniif jaalalli obbolumma ka duriirra caalaa kunuunsamuu qabu. Tasagabbiidhaan tokkummaa keenya agarsiisuu qabna. Wal gargaaruu qabna. Oromoon saba kamiyyuu waliin lola hin qabu Oromiyaa keessatti. Jarittiin jeequmsa kaastee maqaa nu balleessuuf fiigdi waan ta’eef, uummanni keenya karaa bilchina qabuun waan hunda ilaalee duukaa bu’uu qaba.
Previous: ABO: Kaayyoo, Wareegamaa fi Galma
Next: Tarkaanfii fudhatamu, kan diinota tarsimoo QBO miidhuu fi laaleesu ta’uu qaba